ခရစ်စမတ်မှာတောင် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေသူတွေကို အခမဲ့ ကူညီပေးတဲ့ သူရဲကောင်းများ။ – SoShwe
Home/LifeStyle/ခရစ်စမတ်မှာတောင် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေသူတွေကို အခမဲ့ ကူညီပေးတဲ့ သူရဲကောင်းများ။
ခရစ်စမတ်မှာတောင် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေသူတွေကို အခမဲ့ ကူညီပေးတဲ့ သူရဲကောင်းများ။
admin December 28, 2018	LifeStyle Leaveacomment
(၆) စက္ကန့်တိုင်းမှာ လူတစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေသူတွေဟာ ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်စေ၊ စာရိုက်ပြီးပဲဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်နဲ့ပဲဖြစ်စေ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပဲဖြစ်စေ အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးမှုကို လိုအပ်နေပါတယ်။
မေတ္တာသဒ္ဒါတရားထက်သန်တဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာ ရင်ဖွင့်ချင်တဲ့ မည်သူမဆို သူတို့ကို ဆက်သွယ်လာပါက အခမဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင် စေတနာဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း (၂၀၀၀၀) ကျော်ဟာ အင်္ဂလန်သာမက အိုင်ယာလန်မှာပါ ဌာနခွဲပေါင်း (၂၀၀)ကျော်ဖြင့် ဖုန်းအကြိမ်ရေ တစ်သန်းကျော်ကို နှစ်စဉ်ဖြေဆိုပေးပြီး အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ မေတ္တာဖြင့်ကူညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ ဖုန်းအကြိမ်ရေပေါင်း (၅)သန်းကျော် လက်ခံရရှိပြီး ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ ပြသာနာအသစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း သူတို့ရဲ့ နှစ်သက်အားပေးမှုတွေ၊ ဖြေသိမ့်ပေးမှုတွေက စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေသူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုလို အခမဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကို မမေ့မပျောက်ဘဲ အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Previous ပုရိသတ်များကို အံ့အားသင့်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟောလီးဝုဒ်မင်းသားကြီး။
Next (??)??????????? ???????????????? ????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????? Eddie Murphy